Dowladda Soomaaliya oo ka hadashay geeridda Daa’uud Cali Masxaf - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Dowladda Soomaaliya oo ka hadashay geeridda Daa’uud Cali Masxaf
Allaha u naxriistee waxaa magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Itoobiya ku geeriyooday fanaankii Soomaaliyeed Daa’uud Cali Masxaf oo mudooyinkii ugu dambeeyey ku xanuunsanayay dalka Itoobiya.
Ra’iisul Wasaare ayaa tacsi u diray dhammaan umada Soomaaliyeed oo uu ka baxay Fanaanku, waxaana uu sheegay in uu waqti badan ku bixiyay horumarinta Fanka.
“‎‬Waxaan tacsi tiiraanyo leh u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed, Bahda fanka iyo ehelkii uu ka baxay Daa’uud Cali Masxaf. Marxuumka waxaan Alle uga baryayaa inuu naxariistiisa Janno ka waraabiyo ehelkiisana uu samir iyo iimaan ka siiyo.” ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Kheyre.
Wasiirka Warfaafinta Dhaqanka iyo Dalxiiska Xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed ka tacsiyadeyeey geerida Alfanaan Daa’uud Cali Masxaf oo ka tirsanaa Hobalada Qaranka ee Waaberi ayaa eebe uga baryay in uu janadii Fardowso uu ka waraabiyo.
Mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa si gaar ah uga tacsiyadeyeey Hobalada Qaranka ee Waaberi oo uu ka tirsana aiyo guud ahaan umadda Soomaaliyeed gaar ahaan eheladiisa.
Previous articleDHAGEYSO: Warka Habeen 24-1-2020
Next articleMusharaxiinta Galmudug oo soo saaray 7 shuruudood si ay uga qeyb galaan doorashada